Xafsa Luqdmaan oo iyada oo nool balse jirdilan lagu soo wareejiyey eheladeeda & Kenya oo ay kiisaskani ku kordhayaan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Xafsa Luqdmaan oo iyada oo nool balse jirdilan lagu soo wareejiyey eheladeeda...
Xafsa Luqdmaan oo iyada oo nool balse jirdilan lagu soo wareejiyey eheladeeda & Kenya oo ay kiisaskani ku kordhayaan
(Nairobi) 20 Juun 2021 – Gabar 23-jir ah oo deggan xaafadda California Estate ee Nairobi oo 5 maalmood kahor la qafaashay isla markaana dadkeeda laga dalbaday lacag madax furasho ah oo gaaraysa Sh5 milyan oo shilin ayaa lasoo daayey.
Xafsa Maxamed Luqmaan ayaa markii ugu dambeysey ku sugnayd dukaankeeda kabaha ee ku yaalla xaafadda Eastleigh ama Kamukunji Trading Centre Talaadadii, Juun 15.
Sida nasoo gaaraysa Xafsa ayaa hadda waxaa dib loogu soo wareejiyey ehelkeeda iyadoo ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed oo loo gaystey waxaana la dhigay isbitaal si baaris loogu sameeyo loona daweeyo.
Gabadha ayay dadka afduubtay keeneen agagaarka Matopeni oo ku taalla Kayole sida uu sheegay Franklin Mwalah iyadoo la fahamsan yahay in qoyska lagu wargeliyey in ay halkaa ka doontaan, iyagoo soo istaajiyey meel cidlo ah, waxaana halkaa kasoo waday Booliiska Kenya.
Waxaa gabadha ka muuqata in si xun oo naxariis darro ah loo jirdiley si ay lacag uga baadaan eheladeeda iyagoo xitaa mar iyada ka hadashiiyey in yar kaddib markii ay qafaasheen iyagoo ka duubay muuqaal soconayey 35 ilbiriqsi.
”Waa la i afduubtay waxayna dalbanayaan madax furasho. Fadlan soo dira.” ayay tiri Xafsa oo Sawaaxili ku hadlaysey.
Waxaa sidan oo kale loo afduubtaa loona dilaa dadka Kenyan-ka ah, waxaana u dambaysey gabar dhallinyaro ah oo laga qafaashay Kitengela oo la yiraahdo Shantel Nzembi, taasoo markii hore lagu dalbaday lacag dhan 300,000 oo shilin, balse in yar kaddib waxaa la helay iyadoo ceego inta lagu diley lagu dhex ridey boorso.
Previous articleDowladda Kenya oo lagala hadlay afduubka soo kordhay ee loo gaysanayo dadka Soomaaliyeed
Next articleSida loo maareeyey arrinta dhaawaca Kornayl Saneey oo muujinaysa 2 arrimood oo walaac leh